Native Rock Truck Kamel Njikere maka Production Serial | RayHaber | raillynews
[18 / 01 / 2020] Ọkụ ụgbọ ala Istanbul !ağlayan!	34 Istanbul
[18 / 01 / 2020] Isi mmalite Rail nke Erdogan maka Gayrettepe Istanbul Airport Metro	34 Istanbul
[18 / 01 / 2020] Onye isi ala Erdoğan natara Ozi Banyere Galataport Project	34 Istanbul
[18 / 01 / 2020] Keçiören USB Car na Sea World Free N'oge Semester	06 Ankara
[18 / 01 / 2020] Nhicha nke nkuku na inzmir Ọdụ Publicgbọ njem Ọha na Publiczmir	35 Izmir
HomeTurkeyCentral Anatolia Region03 AfyonkarahisarDomestic Rock ụgbọala ụgbọelu na-akwadebe maka Production Serial
11 / 01 / 2020 03 Afyonkarahisar, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, akpakanamde, Turkey, VIDEO
Rock gwongworo Camel na-akwadebe maka Production Serial
Onye ọchụnta ego Şuayp Demirel dị na Afyonkarahisar wepụtara ụgbọ ala njem afọ 22 dị nrọ. Ewezuga injin na igbe ngwa agha, nke ha niile bụ arụpụta ụlọ nke akpọrọ “Kamel kaya, ụgbọ nwere ike ibute tọn 30. Ministri nke Industrylọ ọrụ na teknụzụ na-akwadokwa ọmụmụ ndị a mere iji nyere ụgbọ ahụ aka ịmalite ịmịpụta oke.
Turkey Production ike na ihe niile a na mba Ikike
Mịnịsta nke ụlọ ọrụ na teknụzụ, Mustafa Varank, obere oge gara aga, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nyocha Afyonkarahisar'daki, nwalere gwongworo ahụ.
Ank Ọ bụ ngwá ọrụ dị ike n'ezie. Ndị ọrụ aka anyị chepụtara ma mepụta ya site na ọkọ. Anyị dara nganga na iji ya. Ana m ekele ha nke ukwuu. Turkey bụ mba na nwere ikike iji na-emepụta ihe nile n'ezie. Ihe bara ezigbo uru bụ ndị anyị. Anyị bụ nnukwu obodo nke nde 82. Karịsịa, ndị na-eto eto anyị nwere nkà dị ukwuu n'echiche a. ”
Turkey ẹkenam ụwa ụgbọ ala na-enwe na ndị mmadụ na-ike oké ịnụ ọkụ n'obi Varank, "Ọ bụrụ na Turkey na-ekwere na ike mepụtara ihe niile. Otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke nke a bụ kwụ anyị n'azụ. ”
N'icheta na Minista ya na ndị ọrụ ugbo na-eme mgbe niile, Varank kwuru, “a na m ekwu nke a nye ndị ọrụ aka anyị niile; itinye ego na nwunye, nyepụta ọrụ, ọrụ. Anyi no nonyere unu ..
TRB TRB ARER ARE AKA NA-EKWUR STR NKW VKW ANDGW STR ike
Rockgbọ ụgba mmiri nke ụlọ, nke nwere ike ibu nnukwu okwute na nnukwu okwute "a kọwapụtara," o kwuru na nyefe gwongworo Varank, onye ọchụnta ego Şuayp Demirel'in nke ụlọ ọrụ na-ejikwa ụgbọ ala ha na ego nke aka ha gosipụtara.
Minista Varank kwuru, sị: “Ha echepụtawo ma mepụta nke a. Ha ji arụ ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a. Ana ebubata ugbo ala ndị a niile mana ha arụpụtaala onwe ha ịnọdụ ala. Companylọ ọrụ a 'Anyị na-eme ya. Ndị Turkey na-eme nke a 'ka o kwuru, nọdụ ala ma mepụta ya, na eziokwu, ha na-eri ọnụ ala, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị akụnụba nke onye ọchụnta ego a chọrọ imepụta ya. 'N'ọnọdụ ọ bụla, aga m emepụta 20 n'ime ndị a otu afọ. Ana m ere, ana m ere, hapụ m ka ọ kwụsị 'ọ na-ekwu. Ugbo ala ndi agha di ike ma nwekwaa ugbo ala. Ugbu a na nnwale. ”
ANYI MAKA INWETA OMM H NSỌ A
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ngalaba nke injin na eletriki, Demirel malitere ịrụ ọrụ na nna ya n'ụlọ ọrụ onye na-akpụ ụzụ ma wepụta ngwaọrụ maka okwute okwute. Dị oké nkume na ná nrọ nke na-amị gwongworo na Turkey na-arụ ọrụ na ya ebe ọ bụ na 1997, Demirel na 2019 ka ghọtara nke a nrọ.
Onye ọchụnta ego bụ Demirel, a na-awa okwute, ha na-emepụta igwe, otu n'ime ọrụ ndị kachasị na ọdọ ndị a bụ ibute gwongworo na okwute, ka o kwuru.
Demirel kwuru na a na-eji ụgbọ mmiri ebubata ya na nnukwu ụgbọ njem dị ugbu a. Orum m na-arụ ọrụ na gwongworo a kemgbe 1997 na site na 2011 amalitere m ịme ngwa ngwa n'ụzọ dị oke egwu. Ekpebiri m iwu ụgbọ ahụ na Jenụwarị 2019, na Ọktọba 29, 2019, ejiri m aka m rụọ ya. Ọrụ mmadụ bụ otu, akụ teknụzụ m ji bụrụ otu. E jiri ya tụnyere gwongworo ndị ọzọ, ọ bụ ụgbọ ala nke na-anaghị ada ada. Ọ nwere ike rụọ ọrụ na snow, mmiri ozuzo, apịtị na mkpọda ugwu. Ekpebiri m ime nke a n'ihi na ọ bụ akụrụngwa dị mkpa eji eme ihe. Anyị emeela nke ọma na nkwenye Allah. Anyị mere ya na ndị obodo a. ”
FUUTU AUTOMATIC 6 ADA GEARBOX
Demirel, ụgbọ njem ụgbọ mmiri nke mpaghara ahụ ekeela nnukwu obi ụtọ ma mee ka ọrụ ahụ rụpụta ọrụ maka oke ihe, o kwuru.
Ruckgbọ, nnukwu ngwa ngwa nwere ngwa ngwa 6 na-akọwa Demirel, onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ kwuru na echebara ụdị nkasi obi niile echiche.
Nnwale Ugbo Ogbe ‘D TR Local’
Tram Silkworm 3 na-akwadebe ịdị nro n'ógbè ahụ
Turkey mbụ anụ ụlọ Electric Truck: Anadolu Isuzu NPR10 ụlọ
Sakarya na-akwadebe maka ụgbọ oloko dị elu
Obodo dị na Konya na-akwadebe obi ebere maka ịzụta bọs
Ụlọ ọrụ ski Center nke Bayraktepe na-akwadebe maka oge oyi
Ogige Palandoken na-akwadebe maka oge ahụ
Gini bu ugbo agha nke ulo
ebula njem ugboala nke ulo
UTİKAD Ekekọtara akụkọ abụọ dị mkpa iji pịa
Turkey Logistic Romania ọrụ anyị Ị
Ejiri Button ahụ maka 89th Izmir International Fair